Toriteny Alahady 02 JONA 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 02 JONA 2013
« Andriamanitra manome antsika ny fahefany » Eksodosy 14 : 15 -21
Tantaran’ny Zanak’Israely nanehoan’Andriamanitra ny fahefany . Tena tao anatin’ny tahotra sy ny horohoro ny Zanak’Israely tamin’ny nanenjehan’i Farao sy ny miaramilany azy
Ary hoy Mosesy tamin’ny olona: “……, mijanòna, fa ho hitanareo ny famonjen’i Jehovah….” And 13
Ny Teny aloaky ny vavan’ny Mpanompon’Andriamanitra dia tsy misy tsy ho tanteraka ary eto no tena hanehoan’Andrimanitra ny heriny sy fahefany ka hanambarany fa raha Izy Andriamanitra no miasa tsy misy mahasakana .
1- Tena miandany amin’ny mpanompony Andriamanitra ary fenoin’Andrimanitra fahefana ny mpanompony.
Andriamanitra miasa ao anatin’ny mpanompony rehefa tena mitoetra amin’ny finona sy ny fahatokiana ny mpanompony . Tamin’ny finoana no naneken’i Mosesy ny baikon’Andrimanitra raha nasainy nanainga ny tehiny , nisaraka ny ranomasina ka nandia tany maina ny Zanak’Israely.
Andriamanitra mampiasa ny mpanompony. irahiny ny anjeliny eo aloha sy aoriana amin’ny lalana rehetra izay diavintsika na amin’ny mora na amin’ny sarotra ary porofoiny fa tsy irery isika miatrika ny fainana , ary ny lalana izorantsika dia tsy amin’ny sitrapontsika fa izay itarihin’ny Fanahy Masina antsika jereo and 19.
Ampiasain’ Andriamanitra ny zava-misy rehetra hanaporofoiny fa tsy mahafoy antsika Izy . Teto dia rahona sy afo no nampiasainy hanome fahazavana hitari-dalana sy ho fiarovana amin’ny fahavalo ho an’ny Zanak’Israely.
2- Eo an-tanan’Andriamanitra ny fahefana hanakorontana sy hampisavoritaka ny fahavalo mitady handavo ny ain’ny mpanompony.
Raha niditra ny ranomasina mena ny Zanak’Israely dia tany maina no novakivakiany; fa nanao ahoana kosa ny Egyptiana izay nanenjika ? Fefika tao anaty ranomasina satria nikatona ny ranomasina , nesorin’Andriamanitra ny kodiaran’ny kalesy . Hevi -panahy lehibe raketin’izany dia ny hoe : Tsy maintsy latsaka ao anaty fiainam-pahafatesana izay mitsangana ho fahavalon’Andriamanitra . Iza moa no antsoina ho fahavalon’Andriamanitra ? Ireo izay manenjika ny Fiangonana sy ireo izay manenjika ny mpanompon’Andriamanitra , tsy mampandroso ny Fiangonana , jereontsika ny tantaran’i Saoly niova ho Paoly
Famintinana ny toriteny
Betsaka ny endrika Egyptiana eo amin’ny fiainantsika toy ny aretina , fahasahiranana , korontana , adim-piainana sns. Ny fahefana di a eo am-pelatanan’Andriamanitra , miandany amin’ny mpanompony Izy , ny andrasana amintsika dia ny mba hananatsika firaisana feno Aminy , hianoana sy hankatoavana tsara ny baikony , Lesona tsara alain-tahaka ny fankatoavan’i Mosesy ny baiko rehetra izay nadidian’Andrimanaitra azy tamin’ny nitondrany ny Zanak’Israely.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra . Amen!
ANDRIANARISOA Hajaniaina Célestin , Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 7 juin 2013